I-Plasma 5.2 iyatholakala, ake sibone ukuthi yini okusha [Kubuyekezwe] | Kusuka kuLinux
I-Plasma 5.2 iyatholakala, ake sibone ukuthi yini okusha [Kubuyekeziwe]
Ya sisesikhathini esisha se-KDE SC. Kukhishwe iPlasma 5.2 enezici ezintsha nokulungiswa kwamaphutha okuningi, esizokhuluma ngakho ngezansi.
1 Izingxenye ezintsha zePlasma 5.2
2 Ushintsho lusendleleni
3 Ukufakwa kwe-Plasma 5.2 mathupha
Izingxenye ezintsha zePlasma 5.2
Le nguqulo yePlasma iza nezinto ezithile ezintsha zokwenza i-KDE ideskithophu ephelele kakhulu:
I-Bluedevil: izosivumela ukuphatha amadivayisi we-Bluetooth. Singakwazi ukumisa igundane lethu, ikhibhodi, futhi sithumele / samukele amafayela, ngaphezu kokukwazi ukuzulazula kumadivayisi ahambisana nalobu buchwepheshe.
KSSHAskPass: Uma sifinyelela amanye amakhompyutha nge-ssh, futhi njengoba kufanele kube okunengqondo, umsebenzisi unephasiwedi, le module izosinika isikhombimsebenzisi sokuqhafaza ukufaka iphasiwedi.
UMoon: Ngaleli thuluzi (eselivele laziwa abaningi) sizokwazi ukufaka, ukuphatha isoftware nezinye izengezo zekhompyutha yakho.
Ukucushwa kwe-SDDM: I-SDDM manje sekungumphathi wokufinyelela ongakhetha kuPlasma, esikhundleni se-KDM yakudala, futhi le module entsha Yokumiswa Kwesistimu ikuvumela ukuthi ulungiselele ingqikithi.
I-KScreen: imodyuli yokumiswa kwesistimu yokulungiselela ukusekelwa kwabaqaphi abaningi (bona isithombe sakamuva).
Isitayela sezinhlelo zokusebenza ze-GTK: le module entsha ikuvumela ukuthi ulungiselele izingqikithi zezinhlelo zokusebenza ze-Gnome.
I-KDecoration- Lo mtapo wezincwadi omusha wenza kube lula ukwenza izingqikithi ze-KWin ngokuthembeke ngokwengeziwe. Inememori ehlaba umxhwele, ukusebenza nokuthuthuka kokuqina. Uma ulahlekelwa isici, ungakhathazeki, sizobuyela kuPlasma 5.3.
Ngaphezu kwalokho, manje sesingahlehlisa isenzo sokususa iwijethi kuPlasma:
I-KRunner manje inamandla amakhulu futhi ihleleke ngokwengeziwe uma kuziwa ekuboniseni ulwazi esiludingayo, futhi isivumela ngisho nokulawula isidlali somculo. Futhi, manje yethulwe kusetshenziswa inhlanganisela yokhiye Alt + Espacio.
KWin Isivele iza netimu entsha ebesivele siyibonile ngokuzenzakalela futhi sineqoqo elisha lezikhombisi nezithonjana ezibiziwe Breeze (Brisa), yize ngokubona kwami ​​kusenazo (izithonjana) izinhlelo eziningi zokuzisekela.
Kokunye sinamawijethi amasha wedeskithophu, Imenyu yokufaka ehlukile (I-Kicker) ungafaka izinhlelo zokusebenza kusuka kumenyu uqobo bese ufaka imisebenzi yokuhlela. Baloo uthola ukulungiselelwa futhi manje usebenzisa i-CPU encane kakhulu ekuqaleni. Isihlaziyi sombuzo sinokusebenza okusha ngokwesibonelo ukubhala "uhlobo: Umsindo" eKrunner bese uhlunga imiphumela yomsindo.
Esikhiyweni sesikrini, ukuhlanganiswa ne-logind kuthuthukisiwe ukuqinisekisa ukuthi isikrini sivaleke kahle ngaphambi kokumiswa. Ingemuva lesikrini lingasethwa. Ngaphakathi isebenzisa ingxenye yeprotocol yeWayland, okuyikusasa ledeskithophu yeLinux.
Kukhona ukuthuthuka ekuphatheni iziqaphi eziningi. Ikhodi yokuthola iziqaphi eziningi ephethwe ukuthwalwa ukusebenzisa isandiso se-XRandR ngqo futhi izimbungulu eziningana ezihlobene zalungiswa. Lokhu nokunye ukuthuthuka kungabonakala kufayela le- Khipha Amanothi.
Okungenani ku-ArchLinux sesivele sinamaphakeji athile ahambisana ngokuphelele ne-KDE 4.14 endala, Kate, Konsole, izibonelo zayo ezimbili. Noma kwe-KDE4 izilungiselelo zomsebenzisi zizogcinwa ku- ~ / .kde4 /, kuzicelo ezintsha abazogcinwa kuzo ~ / .config / njengoba I-Arch Wiki.
Okwamanje anginasiqiniseko sokuthi iPlasma 5.2 ingafakwa ngokuphelele ku-ArchLinux, yize ngicabanga ukuthi ingakwazi. Kamuva sizokulethela imininingwane ngakho nokuthi ungakwenza kanjani uma kungenzeka.
Ukufakwa kwe-Plasma 5.2 mathupha
Ngisanda kufaka ukufakwa mathupha kusuka e-Antergos (ngaphandle kwemvelo yokuqhafaza) futhi ngokuyisisekelo yilokhu okudinga ukufakwa ukuze konke kusebenze ngokuncanyana noma ngokufanelekile:
$ sudo pacman -S xorg plasma-meta konsole plasma-nm kdebase-dolphin sni-qt kdemultimedia-kmix umphathi wenethiwekhi oxygen-gtk2 oxygen-gtk3 oxygen-kde4 umoya-mpilo we-oksijini-kde4 kdegraphics-ksnapshot kate
I-KMix namanje ayisebenzi nokho. Lokhu kubukeka kanjena:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Plasma 5.2 iyatholakala, ake sibone ukuthi yini okusha [Kubuyekeziwe]
Amazwana ayi-30, shiya okwakho
Bengizama ukusebenzisa izinhlobo zangaphambilini ku-Archlinux, kepha ngibe nezinkinga eziningi noma ukungahambelani, ngiyethemba kungekudala kuzokwazi ukusebenzisa i-KDE Plasma ekukhiqizeni.
Ngisanda kuyifaka ngisebenzisa i-Antergos njengesisekelo futhi ngeshwa kusencike ezintweni eziningi ezivela ku-KDE 4.14, njengeDolphin. Kusashoda ..
Ngizolinda le Kde 5 evuthiwe ngoba manje iKaos yenza kahle nge-kde 4.14.4
U-Anke ubala ukuya ku-kf5 ekupheleni kukaFebhuwari, azogcina kuphela i-kf5 ne-plasma 5, kuzoyeka ukugcina i-kde 4.
Imininingwane enhle ngendlela ...
Ngezinto ezinjengalezi ngikhumbula i-ArchLinux. Kepha okwamanje ngijabulela i-KDE kuFedora.
Futhi wenza kahle ukukwenza.
Futhi wenza kahle ukukwenza. Futhi, ungafaka iPlasma 5 kuFedora.
Yebo, bengingazi kahle ukuthi kwenzekani kuzicelo zami ze-arch. Ngisebenzisa imenyu yomhlaba wonke futhi vele i-kwrite, kate ne-konsole beyilahlekile. Ngabe sengibona ukuthi kungani. Manje, kunokuthile okungidonsele ukunaka futhi bekuyisimemezelo sika-Andrea Scarpino https://www.archlinux.org/news/transition-of-kde-software-to-the-kde-framework-and-qt-5/ lapho incoma ukushintshela enguqulweni yePlasma 5.2.
Ingabe kuwumqondo omuhle ngempela ukushintshela kuPlasma 5.2? Uma kunjalo, iyiphi indlela eyiyo yokwenza? noma kuzoba ngcono ukwenza ukufakwa okuhlanzekile?
Ngaphambi kwalokho, ngiyabonga kakhulu.
Nginokungabaza okumbalwa ... ake sibheke ukuthi kukhona yini okwaziyo ...
Ngabe i-KWin standalone izofakwa?
Yini ezokwenzeka ngeDolphin futhi kuzoba khona ozothatha indawo yayo?
Ngabe iPlasma ingafakwa ngaphandle kwe-Badoo?
Angazi kahle okwamanje. Bona ukuphawula kwami ​​ngenhla .. 🙁
Kuzwakala kamnandi lokho! Siyabonga ngolwazi… Slds!
I-KDE iba muhle kakhulu ngokuzenzakalela manje
Nokubonga Sithole placeholder image kusho
Ukubukeka okuhle kakhulu, nsuku zonke i-KDE iyathuthuka. Futhi ukusebenza akusho nokukusho, kuhle kakhulu, ngethemba ukuthi iMicrosoft ne-Apple abantshontshi imibono yabo ku-KDE.
Phendula uFernando Gonzalez
Isakhiwo esihle kunazo zonke se-KDE engake ngasibona.
Angazi ezingeni lokusebenza ... kepha kungidonsele amehlo ukuthi kubukeka kukuhle ngokwedlulele, kusuka ku-mandriva angibonanga into eqaphe kangaka
Ngizoqhubeka ngilinde uhlobo oluzinzile lwe-kde 5
i-kde4 ideskithophu ezinzile kunazo zonke engizisebenzisile bengingeke ngiyishintshe okwamanje
Kulabo abasebenzisa iPlasma 5, kuthiwani ngokusetshenziswa kwenqama kuqhathaniswa ne-KDE 4.14?
Baphawula ukuthi ukusetshenziswa kwehle kakhulu. Bengiyivivinya isonto lonke (eyedlule, 5.1), futhi ngabona ukuthi iphendule kahle kakhulu, yanikeza isithombe sokuthi ibinamanzi amaningi kune-KDE4. Vele, benginokuchopha kaningi kwe-kwin ne-plasma, futhi, ngoba nginekhompyutha engizosebenzisana nayo, kanye lapho ngenze okufanele futhi ngabuyela ku-KDE4. Ngizobuye ngiphinde ngihlole u-5.2 ukubona ukuthi kusebenza kanjani. Kepha ngithola ukuthi kuswele kancane ukuthi izinze njenge-KDE4.
Kumele kubonwe ukuthi uma kuqhathaniswa ne-KDE 4.14, i-plasma 5 isebenzisa inkumbulo eyengeziwe ye-RAM.
Kungidla cishe nge-10% ye-4GB, ngakho-ke kudla i-RAM eningi. Kepha ngaphandle kwalokho, i-Arch yami isebenza kahle kakhulu.
I-PS: U-Elav ngomyalo ngicabanga ukuthi ushiye iphakheji «i-plasma», efaka namanye amaphakheji abalulekile. Okungenani izolo lapho ngiyifaka, engikwenzile kwaba:
I-sudo pacman -S i-plasma-meta konsole kdebase-dolphin kate sni-qt breeze-kde4 k3b kdeutils-ark
… Ingabe lokhu kuyi-kde evuthiwe kangaka 4.14…. Ngingayisebenzisa kuze kube ngu-2018 okungenani. Ukugingqika okukhulu!
Ngenze ukufaka okuhlanzekile kwe-15.04, futhi ngaba nezinkinga zesithombe ngekhadi le-NVIDIA GS7300, laqeda ukufaka futhi laba nesikrini esimnyama. Bekufanele ngifake kabusha i-14.10.
U-Ernesto Manriquez kusho
Izici ezintsha ezibaluleke kakhulu kubasebenzisi abaningi azikho lapha, kepha ungakhathazeki, ngiyazifaka.
- Ukusetshenziswa okungu-150 MB kwe-RAM LESS (abantu abadla okuningi kungenxa yokuthi balayisha imitapo yolwazi ye-KDE4, hlola)
- Ijubane landa ngazo zonke izinhlelo zokusebenza ezisheshisiwe. Umphumela unesihluku ku-Chrome; Uhamba ngama-20 kuye kuma-30% ngokushesha, ngokuzithoba.
Phendula u-Ernesto Manríquez
Bengilokhu ngiyivivinya kaningana futhi angikwazi ukuthola izithonjana eziningi kuthileyi ngisho nokwenza lokho abakushoyo ezinkundleni. Kwenzeka kuwe, ngiyifakile ngaphambilini futhi ayilondolozi ngisho nokucushwa.
Ingabe kwenzeka komunye umuntu?
Ezinye izibonelo, i-mega, i-bcloud, i-mail mail ru ngokwesibonelo.
Futhi ukumiswa akulondolozwanga, uma ngiphuma ngingena kufana nokuthi ngisanda kukufaka futhi. Kuyisikhungo esisha futhi esihlanzekile.
Uma ngisebenzisa ama-antergos emshinini obonakalayo ngithola zonke izithonjana kuthileyi, faka noma yini oyifakayo, noma yini.
Okufanayo kuye kwenzeka kimi izolo. Engikwenzile ukususa wonke amafayela wokumisa kusuka kwami ​​/ ekhaya. Ngiqale kabusha futhi nge-voila, izilungiselelo bezisebenza. Angizange ngizame nalabo obaphawulayo, kepha okungenani eyodwa evela ku-MEGA uma ngiyithola. Ngikushiya ubambe. https://plus.google.com/118419653942662184045/posts/cfPeo35HQ4j
Njengoba ngixazulula inkinga ngekhadi le-NVIDIA GS7300, aliphenduli ku-Plasma 5, ngokufakwa okuhlanzekile kwe-15.04, ihlala iyisikrini esimnyama.
Ngifake i-kubuntu 15.04 ngePlasma 5.3 futhi esontweni ebengilisebenzisa lingishaye kaningana. Ngibonile izinkinga ezithile lapho ngisebenza ngama-apks amaningana avulekile, i-libreofice + amarok + Firefox igcina inika ukuthuthumela nokuncipha ekushintsheni kwewindi.
Isibuyekezi sesoftware sivaliwe kimi kabili kuphela.
Futhi kungiphonse izimbungulu eziyiziphukuphuku uhlobo olukhishwe ngaphambi kwezinguqulo ze-beta ze-Ubuntu.
Ngakolunye uhlangothi, ngizwa ukungezwani okuthile neFirefox, ngoba kunginike izinkinga eziningana.
Kwesinye isikhathi ngizizwa sengathi uhlelo lwami lonakele nganoma yisiphi isikhathi hahaha.
Ngingakwazi ukufaka iPlasma 5 kuLubuntu?
IVivaldi, isiphequluli esifuna ukuba yi-Opera enesixhumi esibonakalayo seMetro
Ungenza kanjani ukuthi ushintsho lusuke ku-MS Office luye ku-LibreOffice